“ကျေးဇူးပါ ဝူဟန်ရယ် မြန်မာဖြစ်ရတာ ဒီ တစ်ခါပဲ ခေါင်းမော့ ရတော့ တယ်… ဝူဟန် virus ရယ်.. ၊” – Shwe Ba
နန်း တော် ပေါက် က ကျောက် မျက် စင်တာ ထဲ ကို ဝင် ဝယ် မယ့့် တ ရုတ်ပြည်ကြီးထဲ က လာတဲ့ ဧည့်သည် မှန် သမျှ အပူချိန်စစ် ။ ပိုးသတ်ဆေးငွေ့ တွေနဲ့ ပေါင်းခံ အိမ်ထဲ မှာ တကိုယ်လုံးပေါင်းပြီး မှ ဝင်ခွင့်ပြုတယ် ။ တို့ မြန်မာတွေ ဆို အပူချိန်တောင် လူတိုင်း မစစ်ဖူး ။ လက်ပြပြီး ဝင် ဝင် လုပ်ပေးတယ် ဟီးး သဘော ကျ တာကွာ… ။
အရင်က မြန်မာဆို မျက်နှာထိ မျက်နှာ ထား နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ တရုတ်တွေ အခုဆို ကောင်းကောင်းဝဋ်လည်ပီ ။ ကျောက်ဝိုင်းထဲမှာ ကိုယ့့် မြန်မာအချင်းချင်း စကားပြောနေကြတော့ mask တွေဖြုတ်ထားကြတာ အသက်ရူမွန်း လို့ ။ တရုတ်တွေကျောက်လာဝယ်တော့ အနားရောက်တာနဲ့ ကဗျာကယာ mask တွေ ကိုပြ န်တပ်လိုက် ကြတာ ဟန်တောင်မဆောင်နိူင်ကြဘူး ဟီးး အားတောင် နာတယ်… ။တတ်နိူင်ဘူး လေ ကြောက်တာကကြောက်တာ ငွေရှာတာက ရှာတာပဲ ။ တရုတ်တွေလည်း မျက်နှာတွေ ပျက်လို့။ စိတ်မကောင်းပေမယ့် ကိုယ့် အသက်ကို လည်းနှမြောသေး တာကိုး။
သူတို့ တွေလည်းသိတယ် မြန်မာတွေ ဝူဟန် virus မဖြစ်ဖူးဆိုတာ။ယိချိန် ကျောက်ဝိုင်းထဲဝင်ရင်လည်း မြန်မာဆို သေချာတောင်မစစ်ဖူး ။ သနပ်ခါးတွေလိမ်းထား တာမြင်တာနဲ့ စစ်တောင်မစစ်ဖူး ပေးဝင်တယ်။
ကျောက်ဝယ်တဲ့ တရုတ်ကြီးက မြန်မာစကားမတတ်တတတ်နဲ့ပြောတာ …. ဘာတဲ့…..ခများတို့ မြန်မာ ကျနော် တအား ဂုဏ်ပြုတယ် ” တော်တယ် “တကမ္ဘာလုံး ရောဂါဖြစ်တာ မြန်မာမဖြစ်ဖူး ” မြန်မာက ဘုရား တအားလုပ်တယ် ” မြန်မာပြည် ရောဂါမကူးဘူး ဘုရားကယ်တယ် ” ကျနော် အိမ်မှာ ဘုရား အခု လုပ်ထားပြီ။ ကျနော် ကောင်းကောင်းကန်တော့တယ် တဲ့ ”
ကျေးဇူးတောင်တင်ရမလိုပဲ ဝူဟန် virus ရယ်။ မြန်မာဖြစ်ရတာ…ဂုဏ်မယူရတာကြာပြီ သနပ်ခါးလေးတွေ လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့လိမ်းရဲပြီလို့။
နနျးတျောပေါကျ က ကြောကျမကျြ စငျတာ ထဲကို ဝငျဝယျမယျ့တရုတျပွညျကွီးထဲ က လာတဲ့ဧညျ့သညျ မှနျသမြှ အပူခြိနျစဈ ။ ပိုးသတျဆေးငှတှေ့နေဲ့ပေါငျးခံအိမျထဲမှာ တကိုယျလုံးပေါငျးပွီး မှ ဝငျခှငျ့ပွုတယျ ။ တို့မွနျမာတှေ ဆို အပူခြိနျတောငျ လူတိုငျးမစဈဖူး ။ လကျပွပွီး ဝငျ ဝငျ လုပျပေးတယျ ဟီးး သဘောကတြာကှာ… ။
အရငျက မွနျမာဆို မကျြနှာထိ မကျြနှာထားနဲ့ဆကျဆံတဲ့တရုတျတှေ အခုဆို ကောငျးကောငျးဝဋျလညျပီ ။ ကြောကျဝိုငျးထဲမှာ ကိုယျ့မွနျမာအခငျြးခငျြး စကားပွောနကွေတော့ mask တှဖွေုတျထားကွတာ အသကျရူမှနျး လို့။ တရုတျတှကြေောကျလာဝယျတော့ အနားရောကျတာနဲ့ကဗြာကယာ mask တှကေိုပွ နျတပျလိုကျ ကွတာ ဟနျတောငျမဆောငျနိူငျကွဘူး ဟီးး အားတောငျ နာတယျ… ။တတျနိူငျဘူး လေ ကွောကျတာကကွောကျတာ ငှရှောတာကရှာတာပဲ ။ တရုတျတှလေညျးမကျြနှာတှပေကျြလို့ ။ စိတျမကောငျးပမေယျ့ကိုယျ့အသကျကိုလညျးနှမွောသေးတာကိုး။
သူတို့တှလေညျးသိတယျ မွနျမာတှေ ဝူဟနျ virus မဖွဈဖူးဆိုတာ။ယိခြိနျ ကြောကျဝိုငျးထဲဝငျရငျလညျး မွနျမာဆို သခြောတောငျမစဈဖူး ။ သနပျခါးတှလေိမျးထား တာမွငျတာနဲ့စဈတောငျမစဈဖူး ပေးဝငျတယျ။
ကြောကျဝယျတဲ့တရုတျကွီးက မွနျမာစကားမတတျတတတျနဲ့ပွောတာ …. ဘာတဲ့ …..ခမြားတို့မွနျမာ ကနြျော တအား ဂုဏျပွုတယျ ” တျောတယျ “တကမ်ဘာလုံး ရောဂါဖွဈတာ မွနျမာမဖွဈဖူး ” မွနျမာက ဘုရား တအားလုပျတယျ ” မွနျမာပွညျ ရောဂါမကူးဘူး ဘုရားကယျတယျ ” ကနြျော အိမျမှာ ဘုရား အခု လုပျထားပွီ။ ကနြျော ကောငျးကောငျးကနျတော့တယျ တဲ့”
ကြေးဇူးတောငျတငျရမလိုပဲ ဝူဟနျ virus ရယျ။ မွနျမာဖွဈရတာ…ဂုဏျမယူရတာကွာပွီ သနပျခါးလေးတှေ လညျး ရဲရဲဝံ့ဝံ့လိမျးရဲပွီလို့ ။
ရခိုင်တွင် COVID-19 ပျံ့နှံ့မှု များ လာခြင်း ကြောင့် တစ်နိုင်ငံ လုံး ရှိ အလယ်တန်း ကျောင်းများ ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် မသေချာ သေး